Madaxweyne Trump oo si weyn udifaacay qorshahiisa ku aaddan qoxootiga - BBC News Somali
Madaxweyne Trump oo si weyn udifaacay qorshahiisa ku aaddan qoxootiga
Image caption Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump
Trump oo ka hadlayey Las Vegas, sharciga mareykanka u yaalla ee qoxootiga ku saabsan ayaa wxuuu ku tilmaamay wax lagu qoslo wuxuuna Mareykanka uu uga digay inuu noqdo dal ay qarqiyeen malaayiin qoxooti ah oo ay khatar halkaasi uga timaaddo.
Sharciga Trump iyo guud ahaan waxa uu ka damacsan yahay arrimaha qoxootiga ayaa cambaareyn weyn looga soo jeediyey caalamka iyada oo weliba la sheegay Trump siyaasaddiisa in laga cabsi qabo mid dalka u horseedo iney dalka ka abuurmaan kooxa burcad ah oo sharciga ku xad gudba.
Hadalka Trump ayaa ku soo beegmaya xilli aad loo cambaareeyey mowqifkiisa ku aaddanaa in carruurta iyo qoysaskooda lagu kala reebo xadka ay wadaagaan Mexico iyo Mareykanka inta ay soo tallaabin, inkasta oo uu dib ka oggolaaday qoysaska hadda ku sugan ee carruurtooda laga reebay in la iisu geeyo iyaga iyo waaliddiintooda.
Xaaska Trump Melania trump waxay ka mid tahay dadka sida weyn u dhaliilay mowqifka uu Trump iska taagay carruurta iyo qoysaskooda in la kala reeba, iyada oo weliba booqatay halka ay ku sugan yihiin carruurta oo ku taallo texas.
Image caption Xaaska Trump Melania
Shan fasiraad oo laga bixiyay jaakad-ka ay xiratay Melania Trump
Melania Trump oo si kulul ugu jawaabtay xaaskii hore ee Trump